Muck: kupenga kupona kwekushanya kunouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Muck: kupenga kupona kwekushanya kunouya kuLinux
muck iyo ndeimwe yeavo mavhidhiyo emitambo mazita ayo asingawanzo. Iyi ndiyo nzira yekupona kwehunhu nemifananidzo inozokuyeuchidza nezve mamwe akakurumbira hit vhidhiyo mitambo. Inowanikwa yeGNU / Linux uye yakasununguka zvachose, saka haina kunakirwa nekatsi yezhizha rino ...
Kunyangwe ichiita senge yakapusa uye isingafadzi, chokwadi ndechekuti aya marudzi emitambo yemavhidhiyo yeindie ane magnetism. Chimwe chinhu chakasiyana kune avo vanoda kutiza kubva pane zvakajairwa uye vanoda musanganiswa wakakwana mune ino inonakidza nhanho yakatangwa muna Chikumi 5, uye kuti mwedzi uno watosvika. yeLinux uye macOS nevanozvarwa vanovaka vachitsvaga testers kubva kuSteam.
Muck yakagadzirwa neanogadzira anozvidaidza kuti Dani, ari zvakare mukurumbira YouTuber ine vanopfuura mamirioni maviri vanyoreri. Saka hazvishamise kuti haina kunyanya kufarirwa, asi ini ndinoomerera kuti zvakakodzera kuyedza.
Izvo mugadziri anozvitsanangura muchidimbu chipfupi icho chinoti: «Wakabatwa mumatope echitsuwa, wega kana neshamwari dzako, edza kurarama kwenguva yakareba sezvinobvira uchishandisa zviwanikwa zvaunowana pachitsuwa ichi. »
MuMuck unogona unganidza zviwanikwa zvaunoda, gadzira maturusi, zvombo, uye zvombo zvekurarama pachitsuwa ichi, tsvaga zvinhu zvakavigwa kunze uko, uye uvake imba yako kuti ive masikati. Asi kana husiku hwangodonha, vavengi vako vanoonekwa kubva mumumvuri, uye uchafanirwa kuzvidzivirira zviwanikwa nezvombo zvakagadzirwa mukati mezuva kuunza mambakwedza ari mapenyu ...
Chiitiko chinonakidza, chakazara-chiwikuti iwe unogona kunakidzwa pane yako yaunofarira Linux distro kubva zvino zvichienda mberi. Uye zvese zvinoita kunge zvinoshanda nemazvo. Kubva kuvambwa kwayo yakatopfuura 40.000 mushandisi ongororo, uye zvibodzwa zvakanaka. Iko parizvino ine avhareji yevatambi zviuru gumi online nguva dzose, uye iyo nhamba iri kuwedzera.
Kana iwe uchida kutanga tamba izvozvi nemhubu, unogona kuikanda uye kuiisa zvizere akasununguka kubva Steam.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Muck: kupenga kupona kwekushanya kunouya kuLinux
Haisi kuwanikwa muchiSpanish kubva kuSpain, inoita kuti zvinyatsojeka pamhepo, saka haina basa.